Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan la qaatay Safiirada Dalalka caalamka u fadhiya dalka Somaliya – STAR FM SOMALIA
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan la qaatay Safiirada Dalalka caalamka u fadhiya dalka Somaliya
Wararkii ugu dambeeyay Gobolka Galgaduud iyo Barakac billawday magalada gureceel
Ciidanka Kenya oo dad shacab ah ku dilay Gobolka Jubbada hoose
Gudoomiyaha midowga musharixiinta oo kulan laqaatay madax weenaha maamulka Hirshabeele
Madaxweynaha Somaliya Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa kulan la qaatay Safiirada Dalalka caalamka u fadhiya dalka Somaliya, isaga oo kala hadlay sidii Somaliya looga gacan siin lahaa inay la wareegto ammaanka guud ee dalka.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliya Daa’ud Aweys ayaa u sheegay Wariyeyaasha arimaha sida gaarka ah looga hadlay inay tahay arinta ku aadan amniga Qaranka.
Waxa uu sheegay Daa’ud Aweys in lagama maarmaan ay noqotay diyaarinta Barnaamij ku saabsan qaabka ciidamada Somaliya loogu wareejin lahaa ammaanka guud ee dalka.
Daa’ud Aweys ayaa sheegay si Somaliya ay u qaadato doorkaasi inay muhiim noqotay in la helo taageero caalami ah iyo dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyo ciidamada qalabka sida ee Somaliya si amniga dalka ay u la wareegaan.
“Waxyaabaha sida weyn Diirada loo saaray waxaa ka mid ah Barnaamijka dhanka amniga Qaranka iyo ku talo galka qorshaha Dowladda Somaliya ee ah aakhirka in Dowladda Somaliya dhanka amniga ay kala wareegto howlgalka Midowga Afrika ee Amisom.” Ayuu yiri Daa’ud Aweys.
“Waxaa laga maarmaan noqotay in la diyaariyo Barnaamij ku saabsan qaabka ciidamada amniga Somaliya loogu wareejin lahaa, si Somaliya Doorkaasi loogu wareejiyo waxa ay u baahan tahay dib u dhiska ciidamada kala duwan, sida Booliska iyo Millateriga.” Ayuu yiri Afhayeenka Madaxtooyada Somaliya.
Muddooyinkaan dambe Dowladda Somaliya ayaa sheegaysay inay u diyaarsan tahay la wareegida ammaanka guud ee dalka, hadii ciidamada Amisom dalka ay ka baxaan.
Madaxweynaha Soomaaliya oo cambaareeyay weerarkii garoonka diyaaradaha Istanbul
Ciidamada Jubbaland oo howlgal ka sameeyay Deegaano hoostagga Magaalada Kismaayo (Daawo Sawirada)
Xaaaladda Gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa saaka ah mid cakiran, xili qaar ka mid ah Magaalooyinka Gobolkaasi laga dareemayo xaalad kacsaanan ah iyo saan-saan dagaal.
Wararka aan ka helayno Gobolkaasi Galgaduud ayaa kusoo warramaya in dadka degaanka ay cabsi aad u xooggani soo foodsartay, kadib markii Tuulooyinka iyo degaanada hoos yimaada Magaalada Guriceel ay Ciidanaka Dowladda iyo kuwa Galmudug ay ka wadaan diyaar garowgii ugu dambeeyay ee ay doonayaan in Ahlu-Sunna weerar lagu qaado.
Magaalada Guriceel oo ah meesha ay ugu xooggan yihiin xoogagga Ahlu-sunna ayaa saaka ah mid haawanaysa, kadib markii xalay ay isaga barakacen dadkii degaanka, oo cabsi xooggani ay soo food saarat xalay.
Goobaha Ganacsiga iyo xaruumihii waxbarashada Magaaladaasi ayaa ah kuwo haawanaya, waxaana istaagay guud ahaanba isku socodkii iyo ganacsigii Magaalada.
Ciidanaka Dowladda iyo kuwo Galmudug ayaa xalay waxaa ay gaareen tuulooyin hoos yimaada Magaaladaasi, waxaana ay kaabiga ku hayaan Magaalada sida wararku sheegayaan.
Sidoo kale waxaa jira warar hoose oo sheegaya in Ciidamo kale ay ku sugan yihiin Deegaanannada Haraale iyo Baraxwayne oo Waqooyi ka xiga Guri-ceel, waxaana la sheegay in Ciidankaasi uu hoggaaminayo Guddoomiyaha degmada, iyadoo wararku intaasi ku darayaan in ay qayb ka yihiin diyaar garowga dagaal ka dhan ah Xoogagga Ahlu-sunna.
Xaaladda Magaalada Guriceel oo ah magaalada ugu ganacsiga badan Gobolkaasi, uguna dadka badan ayaa ah mid haatan aad u kacsan, waxaana dadkii ka barakacay xalay ilaa saaka ay gaareen Toolooyinka iyo degaaanada hoos yimaada Guriceel, waxaana dadkaaasi ay sheegeen in ay ka cabsadeen in Cidamadu ay ku dul dagaalamaaan.
Gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya ayaa tan iyo markii ay Ahlu-sunna ay dib isku soo abaabuleen waxaa uu ku jiray xaalad kacsanaan ah, iyadoo saacad waliba Gobolkaasi laga filan karo in uu ka qarxo dagaal aad u qaraaar, maaddama Ciidanaka labada dhinac ay dagaal u diyaar garoobeen, ayna sidoo kale jiraan Ciidamo farabdan oo Dowladdu ku daabushay Gobolkaasi, si ay Ahlu-Sunna meesha kaga saaraan.
Jahawareerka iyo Colaadaha kasoo cusboonaaday Gobolkaasi ayaa waxaa uu keenay in uu xilkii iska casilo Wasirrkii Amniga Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed macalin Fiqi, kaasi oo sheegay in sababta uu xilka uga tagay ay tahay colaadda Gobolka iyo in ay Qooqoor isku fahmi waayeen hannaankii loo wajihi lahaa dagaalka Ahlu-sunna.
Ciidamada dalka Kernya ayaa lagu soo warramayaa in ay dil iyo dhaawac u gaysteen dad Soomaaliyeed oo shacab ah oo ku sugnaa Gobolka Jubbada hoose, waxaana soo baxaya warar dheeraad ah oo ku aaddan dhacdadaasi.
Wararka aan helnay ayaa sheegaya in Ciidmadu ay toogteen Carab Qoriyow, oo ka tirsanaa dadka degaanka, waxaana togashadu ay ka dhacdayn degaanka raaskaambooni ee Gobolka Jubbada Hoose, sidoo kalena waxaa ay dhaawacyo culus gaarsiiyeen labo qof oo shacab ah.
Wararka ayaa intaasi kun daraya in Ciidamada Kenya ay xasuuq ba’an u gaysteen 40 neef oo lo’ah, kuwaasi oo ay lahaayeen dadka degaanku, ilaa iyo haddana lama oga saabbta rasmiga ah eek a dambeysay in Ciidanku ay ku kacaan dhibaatada intaas la eg.
Dadka degaanka ee ku Nool Raaskaambooni ayaa sheegay in haatan ay cabsi xooggan ka qabaan in tallaabo kale ay qaadaan Ciidanka Kenya, iyadoo sidoo kale ay macquul tahay ay dhibaato hor leh gaarsiiyaan dadka shacab ah ee xoola dhaqatada u badan.
Madaxweynaha Maamul Goboleedka Hirshabeelle cali Guudlaawe Xuseen ayaa kulan la qaatay madaxweynihii hore ee Sommaaliya ahna Musharrax u taaagabn qabashada xilka madaxweynaha Shariif Sheikh Axmed.
Kulanka labada mas’uul oo ka dhacay hoyga Musharax Shariif Sheikh Axmed ayaa waxaa diiradda lagu saaray arrimo ku aaddan marxaladda siyaasadeed ee dalka uu marayo.
Si gaar ah waxaa kulanka diiradda loogu saaray arrimaha doorahooyinka, gaar ahaan kaalinta Xildhibaanada ee maamulka uu hoggaamiyo Cali Guudlaawe Xuseen, iyadoo Shariif sheikh Axmed uu bogaadiyay hannaankii ay u dhacday doorashadii Xildhibaanada Aqalka sare ee dhawaan lagu doortay Magaalada Jowhar ee xarunta dowlad Goboleedka Hirshabeelle.
Maamulka Hirshabeelle ayaa haatan u diyaargaroobaya doorashada Baarlamaanka aqalka hoose, iyadoo dhawaan lagu soo gaba-gabeeyay doorashada Aqalka sare.
Warbixinada1 week ago